WAXYAABAHA AYAA LEEYAHAY IN AAD JIRITAANKA QARANKA - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY WAXA YAR OO KA QAADATAA dhalashada Britishka
WAXA YAR OO KA QAADATAA dhalashada Britishka
Legend of warbaahinta Shamima Begum: "Gabadhii wax ku dhajisay sawirada ma ahayn doorashadeyda"
Shamima Begum, oo ku biirtay kooxda Islaamiga ee Suuriya markay da 'ahaan jirtey 15, waxay lumisay muwaadinimadeeda Britishka.
Sida laga soo xigtay ilo ka yimid Whitehall, waxaa suurtogal ah in ay dhalashada Britishka gabadhii 19 ka baxdo, ka dibna waxay xaq u lahayd inay noqoto muwaadin dal kale.
Qareenka qoyskiisa, Tasnime Akunjee, wuxuu ahaa "niyad jab" iyada oo la raacayo go'aanka oo loo tixgeliyey "dhammaan hababka sharciga" si looga hortago.
Mr Begum, oo ka tagay Bariga London ee 2015, ayaa sheegtay in ay rabtay in ay guriga tagto.
Waxaa laga helay xerada qaxootiga ee Suuriya ka dib markii ay ka baxday Baghuz - ee ugu dambeysay ee ISIS - waxayna dhashay wiil
Wareysi uu siiyay BBC, Isniinta Ms Begum ayaa sheegtay in ayan waligeed dooneynin in ay noqoto "gabdha ilmo" oo ku jirta bulshada macluumaadka oo waxay si fudud u doonaysay in ay ilmaheeda si degan ugala socoto UK.  ITV News waxay heshay warqad loo diray Mrs. Begum hooyadeed iyada oo ku martiqaadeysa in ay ku wargaliso gabadheeda go'aanka.
Under ee 1981 Xeerka dhalashada Britishka Qofka waa laga qaadi karaa muwaadinimadiisa haddii Wasiirka Arrimaha Guduhu uu ku qanacsan yahay inuu "u wanaagsanaan lahaa wanaagga dadwaynaha" oo markaa, taasi ma noqon doonto mid aan sharci lahayn.
Ms. Begum waxay sheegtay inay u safartay Suuriya walaasheed baasaboor Ingiriis ah, laakiin walaasheed ayaa laga afduubay iyada oo ku taala xudduudda xuduudda.
Waxay lahaan lahayd asal ahaan Bangladeshi, laakiin, codsiga BBC-da, waxay haysan lahayd baasaboorka Bangladeshi oo waligood uma iman doono dalka.
Arrinta Mrs. Begum's, cunug dhashay oo u dhashay waalid British ah ka hor intii aan laga qaadin jinsiyadooda ayaa wali loo tixgelin doonaa Ingiriiska.
Haddii ay macquul tahay in Ingiriisku uu ka saaro muwaadinimada cunsuriyadeed, markaas saraakiisha waa in ay miisaamaan xuquuqdooda khatarta imanaysa ee ay matalayaan.
Muuqaalka sawirka  Ms. Begum wuxuu ahaa 15 sano wuxuuna ku noolaa Beynal Green, London, markii ay ka tagtay Boqortooyada Ingiriiska 2015
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa yiri: "Maalmihii ugu dambeeyay, wasiirka arimaha gudaha ayaa si cad u sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay ammaanka Ingiriiska iyo dadkeeda."
Wuxuu sheegay in wasaaraddu aysan wax war ah ka bixin kiisaska shaqsiga. laakiin go'aaminta qaadashada muwaadinimada waxay "ku salaysan tahay dhammaan caddaymaha la heli karo oo aan si fudud loo qaadan".
Lord Carlile, oo ah madax hore oo madaxbannaan oo sharci sharci-darro ah, ayaa sheegay in haddii hooyadiis ay ahayd qaran Bangladeshi - sida aynu u malaynayno, sharciga Bangladeshi, Mr Begum wuu ahaan lahaa.
Dal Babu, oo hore u ahaan jirey Bilayska Metropolitan iyo saaxiibka reer Ms. Begum ayaa sheegay in uu "aad u la yaabay" waxa u muuqday "falcelin aan caddaalad ahayn" oo ka socda Wasaaradda Gudaha.
Mr Babu ayaa sheegay in Mrs. Begum aysan waligeed ku dhicin Bangladesh, Mr. Babu ayaa yiri, "Waxay u egtahay sida go'aanka garasho leh, mana hubo sharciga ah go'aankaas."
Saaxiibka Dal Babu, qoyskiisa Ms. Begum, ayaa sheegay in go'aanka Home-ka uu ahaa mid "walaac"
ISIS ayaa lumiyay badi degaanka markasta oo la xakameeyay, laakiin 1 000 iyo 1 500 ayaa laga yaabaa in ay ka tagaan 50 km2 meel u dhaw xudduudaha Suuriya iyo Ciraaq.
Mr Javid ayaa horay usheegay Xildhibaannada in kabadan 100 laba jinsiyadood ayaa horeyba u lumiyay muwaadiniin British ah ka dib markii ay u safrayeen si ay u taageeraan kooxaha argagixisada.
Sanadkii la soo dhaafay, laba British ah ayaa lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin unug ka mid ah IS-ka loo yaqaan "The Beatles" ayaa laga saaray jinsiyadooda ka dib markii lagu qabtay Syria.
"Doonista inaad dayactirto"
] Ms. Begum sheegtay in aysan ka xumahay u tagaan Suuriya oo waxaa qayb ahaan u waxyoonay by Xarakada videos wiilo haystayaasha, iyo sidoo kale videos muujinaya "Nolosha wanaagsan" degay Wilaayada Islaamiga.
Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay in ayan waxba ka qaban wax walba. kooxdu waxay samaysay.
"Waxaan taageersanahay qiyamka Britishka waxaanan diyaar u ahay in aan dib ugu laabto UK oo aan dib u dejiyo oo aan naftayda u dhaqmo," ayay u sheegtay BBC.
Waxay qirtay in ay ahayd "naxdin" by Weerarka Manchester Arena ee 2017 taas oo sheegatay nolosha dadka 22 waxaana lagu sheegay inay tahay IS.
"Waxaan qabaa inay qalad tahay. Dadka aan sharciga lahayn waa la dilay, "ayay tiri.
Laakiin waxay sidoo kale isbarbardhigtay weerarka lagu qaaday weerarrada Suuriya, oo leh: "Waa hal shay oo lagu dilo askari, taasina way fiicantahay, waa is-difaac.
"Laakiin dilka dadka sida dumarka iyo carruurta, sida dumarka iyo carruurta ee Baghuz kuwaas oo si xun loola dagaallamay qaraxyada - waa run ahaantii waa tallabo laba dhinac ah sababtoo ah haweenka iyo carruurta waa la dilay dib ugu soo noqoshada dawlad Islaami ah hadda.
"Waa nooc aargoosi ah. Ujeedadoodu waxay ahayd in ay ahayd aargoosi, sidaas darteed waxaan u maleynayaa, waa arrin, waa xaqq ah. "
Robbie Potter ayaa ku dhaawacmay weerarka Manchester Arena
Robbie Potter, oo dhaawac halis ah u geystay weerarka intii uu sugayay caruurtiisa hoolka arena ee Manchester Arena, isaga oo ku dhawaaqay inuu "cadhooday" oo uu neceb yahay comments by Mrs. Begum.
"Dadku waxay lumiyeen carruurtooda, xubnaha qoyskooda. Maxay tahay inay dareemaan marka ay arkaan, taas oo aan xitaa ka fekereyn karno inaan qof kale soo celino?
"U ogolow in ay la kulanto dhibanayaasha iyo dadka lumay carruurtooda. Hadday sidaas tahay waxa ay rabto. Miyuu iyada tagi lahaa qol ay la socdaan oo ay arkayaan waxa ay xaqnimadooda tahay? "
Kadiza Sultana, Amira Abase iyo Shamima Begum (laga bilaabo bidix ilaa midig) sawirro laga sii daayay bilayska kadib markii ay ka baxeen UK
Ms. Begum waxay UK ka tagtay laba saaxiib oo iskuulada, Kadiza Sultana iyo Amira Abase bishii Febraayo 2015. Ms. Sultana ayaa la rumeysan yahay in ay ku dhinteen qaraxyadii guriga oo aan la garaneynin Ms. Abase.
Mrs. Begum Waxay u dhashay dhalasho todobaadkii hore ka dib markii horey u lumisay laba caruur ah.
Ninkeeda, oo Dutch ah oo diinta Islaamka ah, ayaa lagu soo warramey in ay u baxsadeen koox dagaalyahaniinta Suuriya ah laba todobaad ka hor.
Ms. Begum waxay xaq u leedahay inay racfaan ka qaadato go'aanka Home Office.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.bbc.co.uk/news/uk-47299907
Amy Klobuchar, Madaxwaynaha Maaliyadda CNN
Ferdinand Ngoh Ngoh ayaa wax ka badan hal milyan oo ka mid ah FCFA la leh ardayda Minta
Saint-Pol-de-Léon - Cuntada degdegga ah. Thomas iyo Audrey Gronnier oo ka socda kontaroolada Crok West
Carmalka, afar caruur ah, kansar ayaa ku dhuftay Veronique: "Waxaan doonayaa inaan u dagaalamo"
Morocco: Morocco: Wasiirka Isku-dubaridka by Islamists on Standardization la Israa'iil
Kabtanka Man City Kompany ayaa ka tagi doona xagaaga
Waa abaarta ugu wayn ee Panama ka dhigan tahay mustaqbalka kanaalka - New York Times
DADKA & LIFESTYLE3,459
Video dheeraad ah752